Cebu Pacific Air: miasa mandritra ny 25 taona
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Cebu Pacific Air: miasa mandritra ny 25 taona
Cebu Pacific dia nahatanteraka ny fahitan'i John Gokongwei Jr. aka "Big John" mba hahafahan'ny Filipiana misimisy kokoa mandeha amin'ny rivotra
Tonga lavitra i Cebu Pacific satria nanamarika ny taona nahavokatra 25 hatramin'ny niakarany tamin'ny lanitra tamin'ny 1996
Ao anatin'ny fanoloran-tenan'ny CEB hiantohana ny asany maharitra sy ny fanoloran-tenany hanohy hanompo ny besinimaro, dia nanao sonia trano fampindramam-bola maharitra PHP16 miliara mandritra ny 5 taona ny zotram-piaramanidina tamin'ny 2021 martsa XNUMX niaraka tamin'ny syndicate of domestic domestic banking
Cebu Pacific dia niatrika fanamby maro teo ambany fitarihan'i Lance Gokongwei, CEO, Cebu Pacific Lance Gokongwei
Cebu Pacific (CEB), mpitatitra entana lehibe indrindra ao Filipina, dia reharehany mankalaza ny faha-25 taonanyth tsingerintaona androany. Tonga lavitra i Cebu Pacific satria nanamarika ny taona nahavokatra 25 hatramin'ny nanombohany ny lanitra tamin'ny taona 1996. Nandritra izany fotoana izany dia nahatanteraka ny fahitan'i John Gokongwei Jr. aka "Big John" hahatonga ny fitsangantsanganana an'habakabaka azon'ny Filipiana misimisy kokoa . Ary na dia fantatry ny seranam-piaramanidina aza ny fanolorana saran-dàlana ambany ary ny sandam-bola lehibe dia tojo ny anjarany amin'ny lanitra mikorontana - tsy ny kely indrindra amin'izany ny areti-mandringana izay nampisondrotra ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy ny fizahan-tany manerantany izay tsy nisy toy izany teo aloha - dia niatrika fanamby maro ny fitarihana maharitra sy mahomby an'i Lance Gokongwei, CEO, Cebu pasifika Lance Gokongwei.
Manamarika ny 25 taona sidina isaky ny jiosy
Tamin'ny faramparan'ny taona 1980 dia nahatsiahy ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny Pacific Pacific Lance Y. Gokongwei, fony ny rainy efa nodimandry, no nilalao voalohany tamin'ny hevitra ny hanangana ny orinasany manokana.
Tsy nanana traikefa tamin'ny fitantanana fiaramanidina izy - kanefa tsy nanakana an'i Gokongwei zokiny izany, na nanelingelina azy ny fanantenana ny hanohitra goliata efa niorina. Ankoatr'izay dia vanim-potoana feno fientanam-po satria ny indostrian'ny seranam-piaramanidina eo an-toerana dia nanokatra hatrany tamin'ny alàlan'ny fanalefahana ny dia an-habakabaka.
“Tany Etazonia izy tamin'izany fotoana izany ary namaky momba ny mpitatitra mora vidy antsoina hoe Southwest. Izany no nanombohan'izany rehetra izany, ”hoy i Lance. “Tonga tao amin'ny biraoko izy indray andro ary nilaza hoe: 'Natomboko ity seranam-piaramanidina ity — afaka mieritreritra olona afaka manampy ve ianao?' Ho ahy dia midika izany fa te hanampy ahy izy, ka izany no nataoko. ”
Androany, Lance Gokongwei dia manamarina ny fahombiazan'ny CEB tamin'ny lesona sarobidy sy fiainana sarobidy izay nalainy avy tamin'ny rainy izay nofaritany ho toy ny 'mpandraharaha mahazatra' sy mpahita fahitana; fianarana izay mitarika azy isaky ny mandeha amin'ny fitantanana ny Cebu Pacific sy ny tombontsoan'ny fianakaviana Gokongwei hafa eo ambanin'ny JG Summit Holdings. "Ny lesona rehetra nampianarin'ny raiko anay dia tsy tamin'ny teny no nampianariny fa tamin'ny ohatra. Ary ny lesona rehetra nampianariny dia mitarika ahy mandraka ankehitriny, ”Lance mizara.
Lesona avy amin'i Big John
Na dia mpandraharaha mahomby aza i Big John dia tsy nisalasala nitady toro-hevitra tamin'ny hafa - mpino mafy orina fa tsy mifarana ny fianarana. Hoy i Lance: “Tsy afaka mitsahatra mianatra amin'ny hafa ianao. Na dia ianao aza ny sefo na ny mpitantana dia hahazo tombony amin'ny hevitry ny mpiara-miasa aminao ianao. ”
Raha ilaina dia manohy izy, manohy manindry ny fahaizan'ireo mpanolo-tsaina ary manatevin-daharana ireo vondrona indostrialy mifanakalo hevitra momba ny olana eo amin'ny sehatra misy anao satria “na inona na inona olana atrehinareo, alao antoka fa hahita ny vahaolana ianao, na dia tsy avy aminao irery izany.”
Nandritra ny fiheverana ny fandresen'ny dadany, anisan'izany ny Cebu Pacific, dia nilaza i Lance tamin'ny taona 2019 hoe: "'Hatramin'ny androany, heveriko fa nahomby indrindra tamin'ny asa aman-draharaha izay natolotry ny olona rehetra, ny sarambabem-bahoaka i Dada, satria io no izy . ”
Ao anatin'ny fanamby atrehin'ny kaompaniam-pitaterana an-habakabaka anio, Lance dia maneho fisaorana an'ireo mpandeha sy mpanjifa natoky an'i Cebu Pacific tamin'ny fotoan-dehibe teo amin'ny fiainany. "Ny fanampiana tsy miovaova nomenao anay nandritra ny taona maro dia manosika anay hanararaotra fotoana vaovao, hampiditra #MoreSmilesAhead miaraka amin'iJuan rehetra," hoy izy.
Nanampy i Lance fa ny Cebu Pacific dia manolo-tena amin'ny fanompoana ny besinimaro, miaraka amin'ny fiarovana azo antoka, sy ny fahafinaretana ary amin'ny fahafinaretana isaky ny sidina. "Ny ekipanay matanjaka - manomboka amin'ny ekipa mpandeha ka hatrany amin'ny ekipa mpanao hetsika, hatrany amin'ireo miasa ao an-trano na any amin'ny birao manerana ny tamba-jotra - dia mijanona ho mahatoky amin'ny serivisin'izy ireo amin'ny fanaovana antoka fa tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana alehanao ianao," hoy izy.
Ao anatin'ny fanoloran-tenan'ny CEB hiantohana ny fiasa maharitra sy ny fanoloran-tenany hanohy hanompo ny besinimaro, dia nanao sonia trano fampindramam-bola maharitra PHP16 miliara (eo ho eo amin'ny 440 tapitrisa SGD) ny zotram-piaramanidina tamin'ny 5 martsa 2021 niaraka tamina sindikà Filipina an-trano banky.
Ity fotodrafitrasa fampindramambola syndicated ity dia fifanarahana iray manan-danja izay mampiseho ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny andrim-panjakana ara-bola sy ny banky tsy miankina manohana an'i Cebu Pacific izay miaraka amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina iray manontolo izay voan'ny fihenan'ny COVID. Ity fotodrafitrasa indram-bola natsangan'ny fanjakana ara-bola sy banky indostrialy tsy miankina ity dia maneho ny fahatokisan'ireto andrim-panjakana ireto amin'ny famerenana ny toekarena Filipiana ary ny finoana fa ny Cebu Pacific dia hanana andraikitra lehibe sy lehibe amin'ny fanarenana ara-toekarena ity.
Ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny CEB, Lance Gokongwei, dia nilaza fa: "Izahay ao amin'ny JG Summit sy Cebu Pacific dia mankasitraka ny fahatokisan'ny vondrom-bahoakam-paritra any Filipina, rehefa nahazo ny fandraisana anjaran'ny andrim-panjakana ara-bola sy ny banky tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina amin'ity trano fampindramambola syndicated ity. Cebu Pacific dia mifantoka hatrany amin'ny fanovana ny orinasany hampihenana ny vidin'ny tarehin-tarika mba hanohizany hanolotra sidina mora vidy ary hijanona ho toy ny kaompaniam-pirenentsika isaky ny Juan. ”